चीनले उत्पादन गर्दैछ वायु प्रदूषण कम गर्ने यस्तो कार, कति पर्छ मूल्य ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > चीनले उत्पादन गर्दैछ वायु प्रदूषण कम गर्ने यस्तो कार, कति पर्छ मूल्य ?
चीनले उत्पादन गर्दैछ वायु प्रदूषण कम गर्ने यस्तो कार, कति पर्छ मूल्य ?
पोष्ट गरिएको असार. २७, २०७८ मा १२:३० मध्यान्ह असार २७, २०७८
क्लिकमान्डु २०७८ असार २७ गते १२:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सवारीसाधनले असाध्यै धेरै मात्रामा वायु प्रदुषण गरिरहेको छ । यो नेपालको मात्रै समस्या नभई संसारभरकै समस्या हो । समस्या समाधानका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरिएको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो समस्या समाधानका लागि एउटा यस्तो कार तयार पारिएको छ, जुसले वायु प्रद्षण कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
उक्त कारले गुड्दै गर्दा वायु प्रदूषण कम गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बेलायतको गुडवुड फेस्टिभल अफ स्पीडमा उक्त कार प्रदर्शनीमा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ । विवरणहरुमा जनाइएअनुसार यो कारको मूल्य लगभग ४० हजार पाउन्ड पर्ने बताइएको छ ।
बेलायती डिजाइनर थोमस हिथरविकले निर्माण गरेको एरो कार सन् २०२३ मा चीनमा उत्पादन हुने बताइएको छ । सो कार प्रदूषण कम गर्ने गरी मात्र नभई ठाउँको पनि बचत हुनेगरी बनाइएको हिथरविकले बताएका छन् । तर आलोचकहरूले यो कार प्रदर्शनीका लागि मात्रै उपयुक्त हुने भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन् ।
हिथरविक गुगलको क्यालिफोर्निया र लन्डनको कार्यालय एवम् लन्डनको रुटमास्टर बस डिजाइन गरेर विश्व चर्चित बनेका डिजाइनर हुन् । उनले बीबीसीलाई आफूले यसअघि कहिल्यै कार डिजाइन नगरेको तर चिनियाँ निर्माताको सोचले प्रभावित भएको बताएका थिए ।
‘म हुर्कँदै गर्दा नयाँ-नयाँ कारले नै डिजाइनलाई प्रतिनिधित्व गरेका थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘चीनको आईएम मोटर्सले मसँग सम्पर्क राख्दा मैले भनेँ कि हामी कार डिजाइन गर्दैनौँ । जवाफमा उनीहरूले त्यही भएर हामीलाई डिजाइन गर्न लगाउन खोजेको बताए ।’
बेलायती डिजाइनर थोमस हिथरविकले निर्माण गरेको एरो कार सन् २०२३ मा चीनमा उत्पादन हुने बताइएको छ । गत अप्रिलमा सांघाई कार प्रदर्शनीमा पहिलोपटक देखाइएको सो कारमा ठूलो सिसाको छानो छ ।
भित्र भने कोठा जस्तो गरी यताउता सार्न र खाट बनाउन मिल्ने मेच र खाना वा बैठकका लागि सानो टेबुल छ । यसको ह्यान्डल लुकाउन मिल्छ र बाहिर पानीको छालजस्तो बनाइएको छ ।
‘कार निर्माताहरू विद्युतीय कार बनाउन लागिपरेका छन् तर नयाँ विद्युतीय कार फरक खालको उस्तै कार हुनु हुँदैन,’ हिथरविकले भनेका छन् ।
एरोको बाहिरी भागले हावाको बहावलाई मात्रै प्रतिबिम्बित नगरी अगाडिको भागले एक वर्षमा एउटा टेनिसबल जति हावाको प्रदूषित कण संकलन गर्ने हिथरविकले बताए ।
‘त्यो धेरैजस्तो सुनिँदैन तर तपाईँको फोक्सोमा टेनिस बल जति प्रदूषित कण सोच्नुभयो भने यसले वायु सफा गर्न मद्दत गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, चीनमा मात्रै लाखौँ यस्ता कार चल्दा यसले निकै प्रदूषण कम गर्छ,’ उनले भने ।
यो कार दुवै मानिसले चलाउन मिल्ने र आफै चल्ने खालको उत्पादन गरिने बताइएको छ । कार्डीफ बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक पिटर वेल्सले भने ‘म यो कारले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने देख्दिनँ ।’
यसले सहरी क्षेत्रमा वायु सफा गर्ने कुरा यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई नाप्नै सकिन्न । यो कारको अर्को ठूलो सोच भनेको यसको भित्री भागको थप प्रयोग ह
सरकारको स्थिर पुँजी लगानी दोब्बर हुँदा निजी क्षेत्रमा २ प्रतिशत बिन्दुको मात्रै वृद्धि प्रक्षेपण
‘कोरोना खोप अभाव हुँदैन, २०२१ भित्र सबै नागरिकलाई लगाइन्छ’- प्रधानमन्त्री